အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ လိပ္ပုတ်ကျေးရွာ ၊ အမှတ် ၄ လမ်းမ အနီး ၊ Myanmar Distillery Co.,Ltd မှ အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို ရောင်းချလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်ရန် ဖိတ်ဖေါ်အပ်ပါသည်။ ရောင်းချမည့် ပစ္စည်း ရောင်းချပုံ တိရစ္ဆာန်အစာဖတ် ပိဿာဈေးနှုန်း ၁။ တင်းဒါပေးသွင်းမှုကို ယခုကြော်ငြာ...
Posted Date :27-Feb-2017
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတတ် ကယားပြည်နယ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ချိပ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ကယားပြည်နယ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ မော်ချီး ခဲမဖြူ-အြ ဖိုက်နက်နှင့် ရောရောသတ္တုရိုင်းများ ရောင်းချရန်ရှိပါသဖြင့် ချိပ်ပိတ်တင်ဒါတင်သွင်းကြပါရန် ဖိတ် ခေါ်အပ်ပါသည်- ၁။ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်နှင့်တန်ချိန် - TIN, TUNGSTEN, MIXED CONCENTRATES MAWCHI MIXED ORE(157...
Posted Date :24-Feb-2017
Expire Date :09-Mar-2017
Hotel Project, Service Apartment Project များအတွက် ကုမ္ပ...
လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း Thilawa Propery Development Limited (TPD)၏ သန်လျင်/ ကျောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် လူနေအိမ်ရာနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဧရိယာ (Residential & ommercial Area)အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ၊နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းရှင်များ...
Posted Date :29-Sep-2016
Expire Date :15-Nov-2016
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးမှ FDA အသိအမှတ်ပြု ဆေးဝါးပစ္စည်းမ...
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး အမှတ်(၃၈)၊ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ရန်ကုန်မြို့၊ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသော သံဃာ၊သီလရှင်များအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဆေးဝါးပစ္စည်းများ (FDA အသိအမှတ်ပြု)ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် -...
Posted Date :03-Oct-2016
Expire Date :31-Oct-2016
မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း မှ အိတ...
မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအားမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ (က)အမျိုးအမည် -YAMAHA 40 HP Engine Spare Parts အရေအတွက် -၄၅မျိုး (ခ)အမျိုးအမည် -YAMAHA60 HP Engine Spare Parts အရေအတွက် -၃၅မျိုး...
Expire Date :26-Oct-2016
Thilawa Property Development Limited(TPD) အထူးစီးပွားရေ...
Thilawa Property Development Limited အိတ်ပိတ်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း ၁။ Thilawa Property Development Limited(TPD) ၏ သန်လျင်/ကျောက်တန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အိမ်ရာစီမံကိန်း(Residential and Commercial Area)အတွင်းတွင် Infrastructure ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ သံကူကွန်ကရစ်ရေမြောင်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်လျှောက်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိူင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသေ...
Posted Date :12-Sep-2016
Expire Date :11-Oct-2016
Thilawa Property Development Limited (TPD) မှ Water Tre...
THILAWA PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED အိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ Thilawa Property Development Limited (TPD)၏သန်လျှင်၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင်းရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အိမ်ရာစီမံကိန်း(Residential and Commerical Area)အတွက်1000M day Capacity ရှိ Water Treatment System , Water Stroage Tank နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောမြ...
Posted Date :20-Jul-2016
Expire Date :19-Sep-2016
INVITATION TO SEALED TENDER
ACTION CONTRELA FAIM (ACF) INVITATION TO SEALED TENDER Action contre la Faim- Myanmar Purchase Dossier-BI YG 01470 ACTION CONTRELA FAIM (ACF) is an international Non-Govemmental Organisation, impartial, non-profit.Dedicated to emergency, post-emergency and relief assistance, ACF is working in Northern Rakhine,Kayah State. Action Contre la Faim-Myanmar is inviting sealed tender from those who...
Posted Date :23-Aug-2016
Expire Date :14-Sep-2016
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန...
၁။ အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် မည်သူမဆို ဝင်ရောက်အဆိုပြု တင်ပြနိုင်ပါသည်။ (က) အကြောင်းအရာ	- လူပျို/အပျိုဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပေ ၅၀×ပေ ၃၀ RC (၃)ထပ် (ရေ/မီမပါ) တည်နေရ...
Posted Date :21-Apr-2016
Expire Date :11-May-2016
(1) Sewing Machine (Open bid) 1. Item Description	Sewing Machine Qty	70 ets - Head of Machine - Leg of Machine - Head Cover (Wooden) - Pulley Rope - Oil Box or Container - Other related Material to be ready for running (2) Fertilizer (Seal Bid) 1.	Item Description Compound fertilizer (Nitroposka 15: 15: 15) Qty	1,500 bags 2.	Item Description Urea Fertilizer Qty	1,...
Expire Date :05-May-2016
၁။ Thilawa Property Development Limited (TPD)၏ သန်လျင်-ကျောက်တန်း မြို့နယ်အတွင်းရှိ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်အိမ်ရာစီမံကိန်း (Residential and Comercial Area) တွင် ၃၃ ဧကဗွီပင်မ မြေအောက် ဓာတ်အားအလိုင်း၊ Transformer နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသော မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များ၊ နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖက...
Posted Date :07-Mar-2016
Expire Date :06-Apr-2016
PRIVATE COMPANY SECTOR &amp;AMP; INTERPRISE အိတ်ပိတ်တင်...
မူဆယ်မြို့တွင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်လိုပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများတွင် လာရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ (ရန်ကုန်)	အမှတ် ၅/၅၉၊ အေးရတနာလမ်း၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း- +၉၅(၁)၂၂၁၃၀၈ (လားရှိုး)	ဇ-၁၂/၃၊ ဘုန်းကြီးကျော...
Posted Date :20-Mar-2016
Expire Date :04-Apr-2016
၁။	Myanmar Distillery Co.,Ltd တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်တွင်းဖြစ် ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ လိုအပ်ချက်ရှိပါ၍ ဈေးနှုန်းအပြိုင်စနစ်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိ၍ ထုတ်လုပ်ပေးသွင်းနိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များရှိ လုပ်ငန်းရှင်များ မည်သူမဆို ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်ရေး အိတ်ပိတ်တင်ဒါ ပေးသွင်းနိုင်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ အိတ်ပိတ်တင်ဒါများကို ဒီဇင်ဘာလကုန်အပြီး တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။	ဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျို...
Posted Date :14-Mar-2016
Expire Date :22-Mar-2016